Nzira dzekutarisa Yako Webhusaiti Traffic | Martech Zone
Nzira dzekutarisa Yako Webhusaiti Traffic
Chipiri, Mbudzi 8, 2011 Douglas Karr
Tiri kumashure pakuita kwedu nharembozha uye iPad vhezheni yenyaya nyowani paMartech… iri mumabasa, zvakadaro! Chinhu chimwe iwe chido ziviso ndeyekuti, zvichibva pakurongwa kwemashure, isu tine kushambadza kwakasiyana pane peji. Takaita izvi nekugadzirisa edu akasimba majeti uye kushandisa iSocket yekuzvishandira-iko kuiswa kwemashambadziro.
Kune dzimwe nzira dzakawanda dzekunangisa vateereri vako kupfuura chishandiso chavari kushandisa, hazvo, uye iyi infographic kubva kuMonetate inotaura kwavari. Yazvino avhareji saizi yekuraira, nzvimbo, shanya frequency, inoshanda sisitimu, mamiriro ekunze, zvigadzirwa kana mapeji anoonekwa uye kunyange chinhambwe kunzvimbo yako yekuzadzikisa (kana nzvimbo yehofisi) inogona kushandiswa kugadzirisa ruzivo uye kuwedzera mamitero ekupindura.
Kubva ku infographic: Targeting webhusaiti traffic nekasitoma chidimbu kuvandudza shanduko mitengo inoitwa chete ne25% yevatengesi veadhijitari nhasi. Nediki diki yekutarisisa kuziva, vatengesi vanogona kutanga kugadzirisa chiitiko chewebsite kune wese mushanyi. Targeting ichabatsira vatengi nekugadzira iyo inoshanda zvakanyanya, yega-yakasarudzika online yekutenga ruzivo zvichikonzera kumusoro kutendeuka.
Unounzwa kwauri na: Monetate - yedhijitari yekushambadzira yaunogona kushandisa kuyedza uye kuendesa yakasarudzika zvigadzirwa mapaki, mameseji, uye maficha, chero kupi, pane chero peji, zvichibva pane zvese zvaunoziva nezve mushanyi ari kuona iro peji.
Tags: hunhu hunonongedzageotargetingnhoroondo yekutengatarisamamiriro ekunze anotarisa
Ndiani Ari Kukudzivirira?
Tumira neemail Kwakanyanya Maitiro eNyika Yezororo
Nov 8, 2011 na4:45 PM
Tinotenda nekugovera yedu infographic, Douglas! Zvionge chaizvo.